Home Wararka Gudaha Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Dalka oo soo xiray imtaxaankii shahaadiga ahaa ee...
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Dalka oo soo xiray imtaxaankii shahaadiga ahaa ee F12-aad
Wasiirka Wasaaradda oo soo xiray imtaxaankii shahaadiga ahaa ee F12-aad
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Hiddaha iyo Tacliinta sare ee XFS,mudane Cabdullaahi Abuukar Xaaji ,Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Waxbarashada Mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle (Jaabiri) iyo Agaasimaha Guud ee wasaarada waxbarashada Mudane Maxamed Caabi Xasan ayaa maanta soo xiray imtixaanka Fasalka 12-aad oo Shantii Maalin ee la soo dhaafay ka socday dalka islamarkana ay u fariisteen in ka badan 35,000 oo arday.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Waxbarashada Mudane Maxamed Caabi Xasan ayaa sheegay in imtixaanku uu ku soo dhamaaday Jawi degan, islamarkaana ay ardayda Soomaaliyeed muujiyeen dadaalkooda ku aaddaan waxbarashada, waxa uuna ardayda u rajeeyay natiijo wanaagsan.
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Hiddaha iyo Tacliinta Sare ee XFS,Mudane Cabdullaahi Abuukar Xaaji (Cabdullaahi Carab )ayaa u mahadceliyey cidkasta oo qeyb ka qaadatay oo ay ugu horreeyaan waalidiinta, ardayda iyo Ciidamada Amniga oo qeyb muhiim ka qaatay.
Wasaaradda Waxbarashada XFS,Waxaa ka Go,an in ardayda Soomaaliyeed ay helaan Waxbarasho dhameystiran.
Previous articleDaawo:-Muqaal” Wasiirka ugu Sameynta badan Dowlada Hirshabelle ayaa kulan looga hadlaayay qorshaha Afarta sano ee soo socota laqaatay Iskaashato Beeraleyda Gobalka Sh /Dhexe.
Next articleMadaxweynaha Deni, ayaa maanta kulan gaar ah la qaatay ciidanka Daraawiishta.